Nhau - Ndezvipi zvikamu zvakakodzerana nemazvo machining
Isu tinoziva kuti kunyatsogadzirisa kune zvakadzama zvinodiwa kuti zvive nemazvo, chaiyo machining ine kuomarara kwakanaka, yakakwira yekugadzira chaiyo, uye chaiyo yekuisa chishandiso, saka inogona kugadzirisa zvikamu neakanyanya kudikanwa zvinodiwa. Saka ndezvipi zvikamu zvinokodzera kunyatsogadzirisa? Izvi zvinotevera kuunzwa naXiaobian:
Chekutanga pane zvese, zvichienzaniswa neyakajairika lathes, CNC lathes ine inogara iri tambo yekumhanyisa yekucheka basa, zvisinei neya lathe yekupedzisira kumeso kana iyo yekunze dhayamita yemadhayamita akasiyana anogona kugadziriswa panguva imwecheteyo kumhanya, ndiko kuti uone yunifomu yepamusoro roughness kukosha uye zvishoma. Iyo yakajairwa lathe ine yekumhanyisa yenguva dzose, uye yekumhanyisa kumhanyisa inosiyana neiyo dhayamita. Kana izvo zvinhu zveiyo workpiece uye chishandiso, iyo yekupedzesa mugove uye chishandiso kona inogara iri, iyo yepamusoro roughness inoenderana nekucheka kumhanya uye feed yekumhanya
Kana uchigadzirisa huso hwakasiyana nehupamhi hwehukama, diki furu chiyero chinoshandiswa kune yepamusoro ine diki roughness, uye yakakwira feed chiyero inoshandiswa kune yepamusoro ine hombe hukasha, iyo ine musiyano wakanaka, izvo zvinonetsa kuwana pane zvakajairika lathes . Complex contoured zvikamu. Chero chero curve yendege inogona kuverengerwa netambo yakatwasuka kana yakatenderera arc. CNC chaiyo machining ine mashandiro etenderedzwa kupindirana, ayo anogona kugadzirisa akasiyana akaomarara contour zvikamu. Iko kushandiswa kwecnc chaiyo machining kunoda anoshanda weangwarira kushandisa.
CNC chaiyo machining inonyanya kusanganisira kutendeuka kwakanaka, kwakanaka kunofinha, kuchenesa kwakanaka, kukuya kwakanaka uye kukuya maitiro:
(1) Kutendeuka kwakanaka uye kunofinha: Yakawanda yakajeka alloy alloy (aluminium kana magnesium alloy) zvikamu zvendege zvinogadziriswa nenzira iyi. Natural zvishandiso zvekristaro mangoda maturusi anowanzo shandiswa, uye iyo arc nharaunda yejasi mupendero iri pasi pe 0.1 micron. Machining pane yakakwira-chaiyo lathe inogona kuwana 1 micron kunyatso uye pamusoro kusanzwisisika neavhareji kukwirira mutsauko usingasviki 0.2 micron, uye kurongedza kurongeka kunogona kusvika ± 2 micron.
(2) Kugaya kwakanaka: inoshandiswa kugadzira machira ealuminium kana beryllium alloy zvivakwa zvikamu zvine maitiro akaomarara. Vimba nekururama kwegwara uye chokurukisa chemuchina chishandiso kuti uwane yepamusoro mutual chinzvimbo chinzvimbo. Yekumhanyisa-kumhanyisa yekugaya neyakaganhurwa pasi madhaimani matipi ezve chaiyo magirazi nzvimbo.
(3) Kwazvo kukuya: yakashandiswa pakugadzira shaft kana gomba zvikamu. Zvizhinji zvezvikamu izvi zvakagadzirwa nesimbi yakaoma uye zvine kuomarara kwakanyanya. Yakawanda yepamusoro-chaiyo yekugeda muchina spindles inoshandisa hydrostatic kana inesimba kumanikidza mvura mabheyari kuverengera kugadzikana kwepamusoro. Kuwedzera kune simba rekuomarara kwemuchina chishandiso chokurukisa nemubhedha, iko kwekupedzisira kurongeka kwekukuya kunoenderanawo nekusarudzwa uye kuenzana kweiyo yekugaya vhiri uye nemazvo machining yepakati gomba reiyo workpiece. Kukuya kwakanaka kunogona kuwana kujeka kweiyo 1 micron uye kunze-kwe-kutenderera kwe 0.5 micron.
(4) Kukuya: Kusarudza uye kugadzirisa zvisina kujairika zvakasimudzwa zvikamu pamusoro pekuti zvigadziriswe uchishandisa chirevo chekutsvagurudza kwezvikamu zvinoenderana. Hasha dzechipenga dhayamita, yekucheka simba uye yekucheka kupisa inogona kunyatso kudzorwa, saka ndiyo yakanyanya chaiyo nzira yekushandisa mune chaiyo machining tekinoroji. Iyo hydraulic kana pneumatic mating zvikamu zveiyo chaiyo servo zvikamu zvendiza uye izvo zvinotakura zvikamu zveiyo inesimba kumanikidza gyro mota zvese zvinogadziriswa nenzira iyi kuti uwane kunyatsoita 0,1 kana 0.01 micron uye kusaenzana kudiki kwe055 micron.